🥇 ▷ Labadan barnaamij oo malaayiin ah oo soo dejisid ah ayaa hoos u dhigaya qalabkaaga ✅
Labadan barnaamij oo malaayiin ah oo soo dejisid ah ayaa hoos u dhigaya qalabkaaga
Waxaa soo baxday inaanan mar dambe aamini karin kaydka rasmiga ah markii la soo dejinayo iyo rakibidda codsiyada amniga ah. Dhowaan, dukaanka rasmiga ah ee Google halkaas oo aan u soo dejino malaayiin dalab maalin kasta, Google Play Store, waxaa ku jira codsi leh tiro badan oo soo degsasho ah oo ay ku jiraan Trojan. Codsigan waa CamScanner malaayiin dad ahna waxay ku haystaan ​​taleefannadooda gacanta sababta oo ah, sida muuqata, waa qalab gabi ahaanba amaan ah oo lagu baadho dukumiintiyada iyada oo la adeegsanayo gargaarka fudud ee taleefannada gacanta.
Ogeysiis iyo karti, laba dalabyo been abuur ah
Maantana, mar labaad, dukaanka app ee Google Play Store Mar labaad ayay noqotay diiradda qof walba dareenkiisa arrimo nabadgelyo awgood, waxaana la ogaadey in laba dalab, sidoo kale malaayiin la soo dejinayo ay ka dambeeyaan, ay dhibaato u keenaan kuwa ku rakibay qolkooda. taleefannada. Tani waa app note ah oo loo yaqaan ‘Idea note: OCR, GTD, Text Notes scanner scanner iyo quruxda kale, caafimaadka iyo taam ahaanta loo yaqaan “Jimicsiga Quruxda: Jimicsiga Maalinlaha ah, Tababaraha HIIT ee ugu Fiican”. In ka badan hal sano, labadan barnaamij ayaa niyad jabiyay malaayiin adeegsanaya ka hor inta shirkadda amniga Symantec ogeysiin Google ayna ka saarin Google Play Store.
Sidaa darteed, waxay “xadaan” xogta isticmaale
Laba barnaamij ayaa xayeysiiya meelahan. iyagu ma muuqdaan Loogu tala galay isticmaaleyaasha soo dejinaya oo rakiba, badiyaa qeybta hoose ee khaanadda appka cudurka qaba. Marka isticmaaleygu uu gujiyo ogeysiinta (waa ogeysiis caadi ah, maahan xayeysiin muuqata), xayeysiintu way furmaysaa laakiin lama muujin. Qaabkaan, dalabka ayaa soo sheegi kara in isticmaaleha uu si joogto ah u daawanayo xayeysiinta, isaga oo abuuraya dakhli halkii guji, laakiin iyada oo aan la ogaan.
Waxay sidoo kale u qarsadaan xayeysiinta qaab kale: oo leh farsamo loo yaqaan ‘Packers’: iyagoo beddelaya qaabka iyo socodka faylka rakibaadda barnaamijka (oo loo yaqaanno APK), khamaarayaashu way awoodaan dabeecad beddel Hawlgalkan jahwareerka leh, scanner Google Play Store Kama ay ogaan karaan dhaqan aan caadi ahayn dalabka la marti geliyey.
Dhamaan kuwan gujooyinka “Phantom” waxay saameyn xun ku leeyihiin waxqabadka gacanta, taasoo horseedaysa luminta baatariga naxariis darada iyo kororka taraafikada xogta xad dhaafka ah. Muddo sannad ah, labadan barnaamij ayaa gabi ahaanba iska indho tiray injineerada amniga Google waxayna saameyn ku yeesheen in kabadan 1.5 milyan oo isticmaale Way kala soo baxaan. Kiiskani wuxuu aad ugu adag yahay dhammaan jahwareerka nidaamka iyo wax ka beddelka xirmada ee aan soo sheegnay.
Laba barnaamij horumariya, Feker sir, hadda ma leh barnaamij laga heli karo dukaanka Play-ka kumana uusan siinin warbaahinta sharraxaad ku saabsan labadan barnaamijyo xaasidnimo. Waxaan kugula talineynaa haddii aad aragto in taleefankaagu si caadi ah ugu socdo si aan caadi aheyn, uu leeyahay adeegsiga xog xad dhaaf ah isticmaalkiisa iyo caadooyinkiisuna aysan is beddelin oo batteriga uu si dhakhso ah uga sii daadanaayo sidii hore, u fiirso barnaamijyada aad hadda soo dejiso oo aad rakibtay.
Warar kale oo ku saabsan… Google, amniga